Ukuhlaziya nokuhlola | Ikhasi 2 kwangu 139 Martech Zone
Imikhiqizo yezibalo, ukuqapha, ukwazisa nokushaya amagoli, ukuhlolwa kwe-a / b, ukuhlolwa kwe-multivariate, ukwenza ngezifiso, izinsizakalo nezindaba zabakhangisi ku Martech Zone
NgoLwesibili, Agasti 10, 2021 NgoLwesibili, Agasti 10, 2021 Douglas Karr
Ukuqoqa impendulo yamakhasimende yisinyathelo sokuqala esisobala ekunikezeni okuhlangenwe nakho okuhle kwamakhasimende. Kepha kuyisinyathelo sokuqala kuphela. Akukho okufezwayo ngaphandle kokuthi leyo mpendulo iqhuba isenzo esithile. Imvamisa izimpendulo ziyaqoqwa, zihlanganiswe kwisizindalwazi sezimpendulo, zihlaziywa ngokuhamba kwesikhathi, kwenziwa imibiko, futhi ekugcineni kwenziwa isincomo esincoma ushintsho. Ngaleso sikhathi amakhasimende ahlinzeka ngempendulo anqume ukuthi akukho okwenziwayo ngokufaka kwawo futhi asekwenzile
Ukuze uthuthukise imizamo yakho yokumaketha okudingayo ngempumelelo, udinga ukubonakala kuzo zonke izinyathelo zohambo lwamakhasimende akho nezindlela zokulandelela nokuhlaziya idatha yabo ukuqonda ukuthi yini ebashukumisayo manje nasesikhathini esizayo. Ukwenza kanjani lokho? Ngenhlanhla, ama-analytics ohambo lwamakhasimende ahlinzeka ngemininingwane ebalulekile emaphethini wezivakashi zakho nokuziphatha kulo lonke uhambo lwabo lwamakhasimende. Le mininingwane ikuvumela ukuthi udale okwenziwayo kwamakhasimende okuthuthukisiwe okugqugquzela izivakashi ukuthi zifinyelele
NgoLwesine, July 22, 2021 NgoMsombuluko, Julayi 26, 2021 Douglas Karr
Abathengi bathenga esitolo esiku-inthanethi besuka kwikhompyutha yakho yasekhaya, vakashela ikhasi lomkhiqizo kwesinye isayithi kwithebhulethi, basebenzise i-smartphone ukuthumela ngakho ezinkundleni zokuxhumana bese bephuma bayothenga umkhiqizo ohlobene nse enxanxatheleni yezitolo eseduze. Konke kwalokhu kuhlangana kusiza ukwakha iphrofayili ephelele yomsebenzisi, kepha zonke ziyizigaxa zolwazi ezihlukile, eziveza okuhlukile. Ngaphandle kokuthi bahlanganiswe, bahlala
I-Analytics nokuhlola Umxhasi